Zorin OS 15.3 Inosvika nekuvimbika Kuvandudza uye Dzimwe Shanduko | Linux Vakapindwa muropa
Iyo gumi neshanu vhezheni yeZorin inoshanda sisitimu llegó muna Chikumi 2019 uye, sekureva kweprojekiti, yakatotorwa pasi peanopfuura mamirioni e1.7. Mazhinji eaya kurodha pasi ari kuuya kubva kuWindows uye macOS, zvinoreva kuti vari kubudirira kuunza vashandisi kubva kune mamwe mapuratifomu kuLinux. Nezuro, rinopfuura gore gare gare, chirongwa yakakanda Zorin OS 15.3, vhezheni nyowani yepfungwa yakanangana nekuvimbika uye kugadzirisa mamwe mapakeji.
Nezve mabasa matsva, mashoma kana hapana, mupfungwa yekuti zvizhinji zvezvavakave zvave zviripo kuvandudzwa kwezviripo. Izvo zvavanoona kuita ndezvekuti izvozvi zvese zvichave zvirinani, nekukurumidza uye nemabasa ari nani mushure mekumisikidzwa kubva pakutanga, panguva imwechete iyo pachave nekuburitswa kushoma kwekuita. Ndicho icho chinofanirwa kuve chakabatanidzwa, semuenzaniso, shanduro nyowani dzeFirefox kana LibreOffice.
Zorin OS 15.3 Zvinoratidza
LibreOffice yakagadziridzwa kune yazvino vhezheni yezvikwata zvekugadzira (6.4.6).
Yakagadziridzwa mapakeji emamwe akawanda software, senge webhurawuza.
Zorin Unganidzo yakagadziridzwa kusvika ikozvino otomatiki kutsvaga zvishandiso pamawifi akavimbika eWiFi, ikozvino inosanganisira mabhatani anokurumidza kutumira mafaera kana clipboard mune inozivisa ziviso, ikozvino inotsigira yazvino Android vhezheni uye inovandudza kugadzikana uye kuita.
Kutsigirwa kwemidziyo uye kuchengetedzeka kwakagadziridzwa.
Iwo achangoburwa ekuchengetedza maratidziro akaverengerwa kune ese Zorin OS software
ari Vashandisi vanofarira vanogona ikozvino kurodha pasi Zorin OS 15.3 kubva Iyi link, kwatinowana iyo yekutengesa vhezheni (Yekupedzisira) yeiyo inoshanda system nemutengo we $ 39, iyo Lite, iyo Core kana iyo edition yedzidzo. Pane iro peji rekurodha peji pane enzaniso yezvinopihwa neimwe kana isingape, asi isu tinofambira mberi kuti iyo Yekupedzisira vhezheni inosanganisira yekuwedzera mushandisi maficha, bhizinesi uye multimedia kunyorera, inopfuura makumi maviri mitambo uye inoshanda sisitimu yekuisa rutsigiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Zorin OS 15.3 inosvika kunatsiridza sisitimu yekushandisa uye kuita kuti iwedzere kuvimbika, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva
Alejandro Cerda-Neumann akadaro
Ini ndinoda Zorin os. Ndinoiwana yakanakisa kune vatsva uye kune ese marudzi evashandisi mune zvakawandisa. Kufanana kwaro neWindows kunoita kuti iyo yekudzidzira curve ive yakaderera chaizvo. Iyo yakagadzikana, inokurumidza, uye yakanaka. Ndine vhezheni 15.3 Yekupedzisira yekutsigira vanogadzira, uyezve iyo inondipa yakasarudzika rutsigiro, inodikanwa kune newbie seni. Ndinoishandisa zvese kubasa nekumba.
Pindura kuna Alejandro Cerda Neumann